NBA News: Draymond Green “waan Burburinayaa oo Baabi’inayaa Cleveland!” – Radio Daljir
May 28, 2017 3:16 b 0
Cayaaryahanka Draymond Green oo weli ka cayarsan dhacdadii sannad hore ee hal cayaar ganaax looga fariisiyey, loona sababeeyo sababta Cavaliers-ku ay koobka u qaadeen ayaa si caro ku jirta uga hadlay waxa uu sannadkaan la damacsanyahay LeBron James iyo Cleveland Cavaliers.
Draymond Green oo u waramay NBA.com ayaa yiri “waa burburinayaa oo baabi’inayaa Cleveland. Haddii iyo laakiin iyo laga-yaabee ka hadli mayo. Saas oo ay tahay nidaam baa jira aan dantaas ku gaarayo. Dantaas markii aan gaarana iga sug in aan baabi’iyo oo aanan waxba ka reebin.”
Dhanka Cavaliers oo hadalkaas loo geeyey siiba cayaartowga Kevin Love oo ah kan ilaalin doona Green ayaa ku jawaabay barxadda ayaa la isugu imaan doonaa, waana la is arki doonaa.
Hadalka iyo hanjabaadda Green ayaa cayaarta Khamiista ee horyaalka NBA-da waxay sii galisay xiiso dheeri ah, ayada oo horay loo filayey in ay noqoto cayaartii ugu xiisaha badnayd horyaalka NBA-da abidan, waa sida ay faalleeyayaasha NBA-du baryahaan qorayeen, talafishanadana kaga warbixiyeen.
Cayaarta koowaad waxay bilaabanaysaa habeenka Khamiista, 9 PM waqtiga USA, TV-ga ABC, waana 7 ciyaarood tirada ugu roon, taas oo macnaheedu yahay koobka waxaa qaadaya kooxda ku guulaysata 4 cayaarood.